Dagaalka Mourinho & Parker - Jose Mourinho Oo Raaligelin Ka Dalbaday Fulham Haddii Ay Shax Adag Soo Safaan Kulanka Caawa | Laacibnet.net
Dagaalka Mourinho & Parker – Jose Mourinho Oo Raaligelin Ka Dalbaday Fulham Haddii Ay Shax Adag Soo Safaan Kulanka Caawa
Jose Mourinho ayaa sheegay in Fulham ay tahay inay raaligelin bixiso haddii ay caawa shax adag kala hortagaan kooxdiisa Tottenham isagoo ku eedeeyay kooxda Galbeedka London ka dhisan inay halis gelisay xilli ciyaareedka Premier League.
“Miyaad dooneysaa in xilli ciyaareedka la dhameeyo mise ma dooneysaan?” ayuu tababaraha Spurs si carro leh u yiri, xilli labada kooxood ay eedeyn dusha isaga tuureen ka hor kulanka la isku qasbay ee ay caawa ciyaarayaan.
Tababaraha Fulham Scott Parker ayaa sheegay inay tahay fadeexad iyo qalad weyn in kooxdiisa waqti kooban gudaheed lagu qasbo inay kulankaan ciyaarto si jadwalka looga qafiifiyo Tottenham.
“Aad ayaan u careysanahay, waan niyadjabsanahay” ayuu si carro leh u yiri Parker. “Miyaan aaminsanahay inay tani dhici laheyd haddii ay noqon laheyd kulan labo koox oo waa weyn? Maya, uma maleynayo inay dhici laheyd. Waa cadaalad darro.”
Ciyaartoyda Fulham ayaa waqti dhow ka soo laabtay karantiil, waxayna sheegeen inay safi lahaayeen da’ yartooda kulankii FA Cup ee QPR haddii ay ogaan lahaayeen inay la ciyaarayaan Spurs afar maalmood ka dib.
Mourinho ayaa yiri: “Waxaan ciyaarnay haddii aanan qaldaneyn 11 kulan ka badan inta ay Fulham ciyaartay tan iyo bilowgii xilli ciyaareedka.
Inkastoo tiradiisa uu hal ku darsaday haddii uusan xisaabineynin kulankii guusha la iska siiyay Ee Leyton Orient ee Korona Fayras u baaqday hadana dooda Mourinho waa mid cad. Kulankaan waa kulankii 30aad ee ay Tottenham ciyaartay 122 maalmood tan iyo markii uu bilowday xilli ciyaareedka. Fulham waxay u tahay kulankii 20aad.
“Waxaan ciyaarnay isbuuc walba seddex kulan” ayuu yiri Mourinho. “Hal isbuuc waxaan ciyaaray afar kulan. Waxay la ciyaareen QPR Sabtidii. Waxay heysteen Axad, Isniin iyo Talaado si ay isagu diyaariyaan kulankaan.
“Haddii ay la yimaadaan kala bar ciyaartoydooda, anigaa ugu horeyn doona dadka raaligelinaya iyaga, anigaa ugu horeyn doona inaan sheego inaan faa’ido ku ciyaarnay.
“Haddii ay la yimaadaan shaxdooda ugu adag, markaas waa inay ina raaligeliyaan dhamaanteen.”
Shax Ciyaareedka Thomas Tuchel Uu Ka Hirgelinayo Chelsea Oo La Soo Bandhigay Si Loo Soo Saaro Timo Werner